ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၄) - Myanmar Network
ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုသင့်သော ထူးကဲသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကားများ - အပိုင်း (၄)
Posted by Language Republic on November 19, 2015 at 11:27 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Ace ကတော့ ထူးခြားပြောင်မြောက်သော (သို့) အကောင်းဆုံးဖြစ်သောဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဗန်းစကားဖြစ်ပါ သည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်သည်ဟူ၍လည်း အဓိပ္ပာယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ - Jenny is ace at the lab experiments.
(ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုတွေမှာ ဆိုရင် ဂျင်နီကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ။)
(အဲဒီစာမေးပွဲကို ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။)
Damp squid ဆိုသည်မှာ ပေါက်ကွဲတတ်သော ပစ္စည်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရသော "squib" နှင့် စိုစွတ်နေသောအခါ မပေါက်ကွဲတော့သော ၄င်း၏ သဘောတို့ကို အခြေခံပြီး ပေါ်ပေါက်လာသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်စုံ တစ်ရာသည် ဘယ်နည်းနှင့်မဆို ရှုံးနိမ့်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဗြိတိသျှဗန်းစကားဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ - The party wasabit ofadamp squib because only Richard turned up.
(Richard တစ်ယောက်ပဲလာတဲ့အတွက် ပါတီကတော့ အဖျားရှုးသွားတယ်ကွာ)
အနည်းငယ် ခေတ်မမီတော့သောမူဖြစ်သော်လည်း ယခုထက်တိုင် အသုံးပြု၍ အဓိပ္ပာယ်ကလည်း ဆီလျော်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ "All to plot"၏ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်သည် ထိန်းချုပ်၍ မရတော့ပဲ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင် ရှုံးနိမ့်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ - The birthday party went all to pot when the clown turned up drunk and everyone was sick from that cheap barbecue stuff. (လူပြက်က အရက်မူးလာပြီး လူတိုင်းကလည်း အပေါစား အသားကင်တွေစားပြီး နေမကောင်းဖြစ်ကြတော့ မွေးနေ့ပွဲက ထိန်းချုပ်မရတော့ဘဲ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပျက်စီးသွားတယ်။)